तयारी नहुँदा दोस्रो चरणमा भयावह – Dainik Lumbini
तयारी नहुँदा दोस्रो चरणमा भयावह
तीन तहका सरकारले गत वर्ष यही सिजनमा भएको महामारी बिर्सेर तयारी नगरेपछि यो वर्ष झन बिजोग भइरहेको छ ।
कोरोना महामारीका पहिलो चरणबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो चरणमा अवस्था भयावह देखिएको छ । तीन तहका सरकारले समयमै स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । पछिल्लो दुई सातामा दर्जनौ कोरोना संक्रमितले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाएका छन् ।
रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्री लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बाहिर उभिएर टोलिफोनमा बोलिरहेका थिए । उनले बिहानैदेखि आइसियुसहितको खोजी गरे । वडाध्यक्षकी श्रीमतीलाई आइसीयुमा राख्नु थियो । बुटवलदेखि काठमाडौंसम्मका अस्पतालमा फोन गरे तर आइसीयु बेड फेला परेन । कोरोना संक्रमणपछि अक्सिजन कमी भई थलिएकी वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दामोदर क्षेत्रीकी ४९ वर्षीया श्रीमती कुष्ण कुमारीलाई उपचारका लागि बुटवल ल्याइएको थियो । चिकित्सकले आइसीयुमा राख्न सुझाव दिए । तर, बेड फेला नपरेपछि ‘फिभर वार्ड’मै राखियो । बैशाख १४ गते मंगलबार उनको निधन भयो ।
पश्चिम नवलपरासी रामग्रामका ३५ वर्षीया युवाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा बैशाख १३ गते उपचारका लागि आएका उनलाई आइसीयु आवश्यक थियो । उनका आफन्तले चारैतिर खोजी गरे तर आइसीयु बेड फेला परेन । आइसीयु नभएपछि अस्पतालले त्यहीकै नर्मल बेडमा राखेर सिलिण्डरबाट अक्सिजन दियो । तरपनि उनको जीवन बच्न सकेन । बैशाख १४ गते मंगलबार उनको ज्यान गयो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डन डा. मोहम्द नुरूल होदा आइसीयु नभएकै कारण उनको ज्यान गएको बताउँछन् । ‘हामीले बुटवल र भैरहवाका अस्पतालमा आइसीयु बेड खोज्यौ तर खाली भएन,’ उनले भने–‘आइसीयुको सहयोगमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको उपचार नभएरै ज्यान गयो ।’
यी दुई पछिल्लो साता भएका घटना हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा आइसीयु नपाएरै मृत्यु हुने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । बुटवलमै ६ जनाभन्दा बढीको अक्सिजन खोज्दा खोज्दै ज्यान गयो । ज्यान जाने जोखिम बढी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । गत वर्ष कोरोना महामारी भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ्ग, नेपालगञ्जमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो । पहिलो चरणको महामारी सकियो । ०७७ चैतको दोस्रो सातासम्म आइसीयु बेडमा एकाध बिरामी थिए ।
चैतको दोस्रो साताबाट भारतमा संक्रमण उच्च दरमा बढ्न थाल्यो । त्यसयता रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै १० हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए । भारतबाट फर्किएकाबाट नेपालमा दोस्रो चरणको संक्रमण फैलने र बिरामी बढ्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिइरहेका थिए । पहिलो चरणको महामारी र चेतावनीबाट सरकारले चेत नखाएपछि दोस्रो चरणमा विजोग अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो साता दैनिक एक हजारभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् । तर, अस्पताल बेड र आइसीयुहरू एक वर्ष अघिकै हालतमा छन् । कतिपय निजी अस्पतालको सेवा अहिले बन्द छ । अस्पतालमा बेड नथपिने र लक्षण भएका संक्रमित बढ्दा स्थिति भयावह हुने चेतावनी चिकित्सकको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको दाङको बेलझुण्डी, बाँकेको भेरी अस्पताल, बुटवलको कोरोना विशेष र भैरहवाको भीम अस्पतालमा मात्रै आइसीयुसहितका बेड छन् । त्यो संख्या जम्मा ३९ छ, भेन्टिलेटर २१ वटा छन् । जटिल प्रकृतिका बिरामी मात्रै यहाँसम्म आउने गरेका छन् । एउटा बिरामीलाई निको हुन ९ देखि २० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । निको वा मृत्यु भएमात्रै अर्काे बिरामीले उपचार पाउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख २० गतेसम्म संक्रिय संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघेको छ । यी संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेशभर जम्मा ३ सय ३४ वटा सुविधायुक्त बेड छन् । अन्य सामान्य बेडको संख्या ५ सय २६ छ । तयारी नहुँदा………………
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार चारवटा सरकारी कोभिड अस्पतालमा ३९ आइसीयु र २१ भेन्टिलेटर छन् । अन्य एक सय तीन एचडीयु हुन् । सरकारी अस्पतालमा १ सय ९२ वटा बेड छन् । यो संख्या गत वर्षभन्दा पनि कम हो ।
निजी क्षेत्रका ८ वटा अस्पतालबाट कोरोनाको उपचार हुने गरेको छ । ती अस्पतालमा १ सय ७१ आइसियु, एचडीयु र भेन्टिलेटर छन् । सामान्य बेड संख्या ३ सय ३४ मात्रै छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चरणमा देखिएको संक्रमणमा लक्षणसहितका बिरामी धेरै छन् । अधिकांशलाई अक्सिजन नै दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मृत्युदर समेत बढेको छ । ०७८ को बैशाख महिनाको २० दिनमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ६५ जनाको ज्यान गएको छ । यो अघिल्लो महामारीमा मृतकमध्येको झण्डै आधा हो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरी दोस्रो लहरको कोभिड तीब्रगतिमा सर्ने र लक्षणसहित देखिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले जसलाई लक्षण देखिएको छ, उसलाई अक्सिजनको सहायता आवश्यक देखिएको छ,’ उनी भन्छन्–‘यसो हुनु डरलाग्दो हो । सचेत र तयारी धेरै हुनुपर्छ ।’
कोरोना संक्रमितको बिरामी उपचारका लागि भइरहेको तयारीप्रति सरकारी कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन् । सरकारले अहिलेसम्म अस्पतालमा पुगेका बिरामीको मात्रै निगरानी गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमितको १० प्रतिशत पनि अस्पताल पुगेका छैनन् । धेरै घरमै बसेका छन् । घरमै बसेका करिव एक दर्जन बिरामीको मृत्यु भएको छ । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ स्थानीय सरकारले होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रूपन्देहीमा एकसय बिरामीलाई हेरचाह गरेर मात्रै भएन, बाहिर भएका २२ सय संक्रमितलाई कसले निगरानी गर्ने ?’ उनले भने ।
दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण रोक्न सीमामा कडाई हुनुपर्ने थियो । तर, जिल्लामा लकडाउन सुरु भइसक्दा पनि सीमाबाट निर्वाध आउनेक्रम जारी छ । पहिलो चरणको महामारीमा स्थानीय सरकारले सीमाबाट आफ्नो पालिकाका नागरिकलाई गाउँकै क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउने काम गरेका थिए ।
रूपन्देहीका सैनामैना, बुटवल, तिलोत्तमा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले अस्पताल नै बनाएर सेवा थालेका छन् । अरू स्थानीय सरकार कोरोना महामारीप्रति बेखबर जस्तै बनेका छन् । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले हरेक स्थानीय तहले एउटा आइसोलेसन अस्पताल बनाउने हो भने महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने बताउँछन् । सैनामैना नगरपालिकाले ५ आइसीयुसहित ४५ बेडको अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चार वटा कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकार एक वर्षअघिकै बेड संख्यामा सिमित भएको छ । बाँके जिल्ला कोरोनाले आक्रान्त हुँदा समेत प्रदेशको तयारी थिएन । प्रदेश सरकारले चारवटा अस्पतालमा आइसीयु बेड थप्न बैशाखको पहिलो सातामात्रै एक करोड ७५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, त्यसको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
दोस्रो चरणमा आएको कोरोना भेरियन्टले युवापुस्तालाई आक्रमण गरेकाले चिकित्सकहरू झन भयावह अवस्था देख्छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गिरीका अनुसार अहिले युवापुस्तामा संक्रमण देखिने दर ६०÷४० मा छ । पहिलो चरणमा जेष्ठ नागरिक ८० प्रतिशत थिए भने युवाहरू २० प्रतिशत । अहिले करिव ६० प्रतिशत देखिन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले आइसीयु र अन्य सामान्य बेड थप्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सरकारले बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ, अहिलेकै कोरोना अस्पतालहरूमा बेड थपिनेछन् ।’– उनले भने । उनले बुटवलसहित केही अस्पतालमा बेड थपिइसकेको बताए ।
अस्पतालहरूमा बेड मात्रै होइन, जनशक्ति र अक्सिजनको समेत अभाव छ । बाँकेको बेलझुण्डी, बुटवलको धागो कारखाना, बाँकेको भेरी अस्पतालमा सीमित जनशक्तिले सेवा दिएका छन् । संक्रमित चिकित्सक नै सेवामा छन् । गतवर्ष प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका करीव दुई सय स्वास्थ्यकर्मीको अवधि सकिएपछि जनशक्ति अभाव भएको हो । प्रदेश सरकारले आइतबार मात्रै झण्डै ६ सय नयाँ जनशक्ति कोरोना अस्पतालमा थप्ने निर्णय गरेको छ ।
आईसोलेटेड अस्पतालको काम तत्काल अगाडी बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
स्थायी राजधानीमा करोडौंको अस्थायी पूर्वाधार
अस्पतालको गेटमै बित्यो रात